Bụrụ Oreè Bitcoin | Paxful
Nweta ego site na ire Bitcoin gị na Paxful site na iji usoro ọkwụkwụgwọ 350+
Na Paxful, bido azụmaahịa gị n’ime nkeji ole. Mepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na Bitcoin gị, setịpụ oke ego, ma wulite ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche iji bulie uru gị. Banye dị ka onye na ere ahịa taa ma mepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa izizi gị.*
Debanye aha m!
Ntọala ziri ezi nke atụmatụ iji jikwaa ahia, ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa , na stats gị
Karịrị 6nde ndị ọrụ debara aha gburugburu ụwa
Ndị debanyere aha tụkwasịrị obi karịrị 12,000 na ere Bitcoin
Nkwado dị elu maka ahụmịhe azụmaahịa na enweghị ntụpọ
Weta Bitcoin gị na Paxful wee ree maka uru
Usoro ọkwụkwụgwọ 350+
Ego ọkwụkwụ azụmahịa 0-2%
Nkwado VIP maka ndị na ere nnukwu olu
Nyocha nke azụmahịa na nweta
Programụ Mgbakwụnye ịnweta ndị na ere ahịa ọhụụ ma gbasaa azụmahịa gị
Na ere ahịa na Paxful ma bido azụmaahịa fintech nke gị
Ọnụ ego Bitcoin dị ugbu a:
1. Mepụta ma ọ bụ chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa
Ị nwere ike ịchọgharị ma ọ bụ mepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa maka ịzụta na ire Bitcoin. Tọọ ọnụego gị, chọta onyeòtù azụmaahịa , ma mee azụmahịa mbụ gị taa.
2. Wuo profaịlụ gi
Chọta ndị na azụ ahịa site na imecha nkwenye, igbakwunye onyonyo profaịlụ na ịnakọta nzaghachi ahụike. Inwe ogologo usoro azụmaahịa na eme ka aha gị di nma ma nyere gi aka inweta ntukwasi obi nke ndị ahịa.
3. Zụo ahịa ma rite uru
Zụta na ọnụ ala, ree na ọnụ elu. Nke a bụ ntọala nke nnukwu azụmaahịa ma anyị kwenyere. Muta ihe banyere azụmahịa. na Paxful, site na ebe enyemaka anyị.
Nwe amamihe, oge ọ bụla, ebe ọ bụla
Echegbula onwe gị banyere ịhapụ ịzụ ahịa, ma ọ bụ ozi sitere n'aka ndị ahịa. Paxful dị mfe iji ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ gị niile. Ngwa iOS na Android anyị, ga ahụ na ị nọ mgbe niile ma dịrị njikere ime ihe.
Ndị debanyere aha tụkwasịrị obi na ere Bitcoin 12,000 debanyere aha
Nweta ego karie na Programụ Gbakwụnye Nke Paxful
Emepụtara Programụ Gbakwụnye iji nyere gị aka ịbawanye uru gị site na ịkpọ ndị enyi gị, ndị ezinụlọ gị, yana netwọkụ gbatịrị agbatị na platfọmu anyị.
Uru ozugbo na ahia ọ bụla:
50% nke ụgwọ mmekọ gị Tier 1
10% nke ndị mmekọ Tier 2 gị nke ndị mmekọ ha kwụrụ
Lelee ndị Ọzọ
* Ị ghọtara ma kwenye na Paxful adịghị enye ndụmọdụ gbasara iwu, ụtụ isi, ma ọ bụ ndụmọdụ itinye ego, yana ruo n’otu i chere na ọ dị mkpa, ị ga agakwuru ndị ọkachamara tozuru oke n’ókèala gị tupu i jiri isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ Paxful ma bụrụ onye òreè ahịa. Biko cheta na arụmọrụ gara aga egosighi arụmọrụ n'ọdịnihu.Paxful anaghị eme nkwa ọ bụla ma ọ bụ nkwa ndị ọzọ gbasara arụmọrụ ego ọ bụla ma ọ bụ nsonaazụ ọ bụla a ga enweta site na ịbụ onye na-ere Paxful ma ị ghọtara ma kwenye na mkpebi niile iji platfọm isi n'otu ọgbọ fere n'otu nke Paxful bụ nke gị na naani. Ị ghọtara ma kwenye na anyị anaghị anabata ibu ọrụ ọ bụla maka ya, na ọ nweghị ọnọdụ ọ bụla ga adịrị gị n'ihe metụtara, mkpebi gị. Ị ghọtara ma kwenye na onweghi n’ọnọdụ ọ bụla a ga ewere ojiji nke isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ Paxful na ịbụ onye na ere ahịa ka ọ mepụta mmekọrịta nke gụnyere inye ma ọ bụ ntụgharị nke ndụmọdụ itinye ego.